Samsung mobile Device တွေ ပျောက်ရင် ရှာကြမယ်... | IT Sharing Network
Samsung mobile Device တွေ ပျောက်ရင် ရှာကြမယ်...
အရင်ဆုံး Device ကို samsung အကောင့်လုပ်ပြီး sing in ၀င်ထားလိုက်ပါ။
မိမိဖုန်းကိုကောက်ရတဲ့ သူက sim card ချိန်းပြီးသုံးတဲ့အခါပါ မိမိကိုလာပြီးသတိပေးစေချင်တယ်ဆို
ရင်တော့ setting >> Serurity >> SIM change alert သို့ဝင်ပြီး password ပါပေးထားလိုက်ပါ။ထို့နောက် မိမိဖုန်းကိုမက်ဆေ့ပို့၇န်အတွက် ပို့လိုသော ဖုန်းနံပါတ်ကိုပါ ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ ဒါဆိုရင်တော့ ရပါပြီ။ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ ဖုန်းကိုရှာဖို့ရန် content.samsung.com
ဆိုက်သို့သွားပြီး မိမိဖုန်းထဲမှာ sing in ၀င်ထားသောအကောင့်နဲ့sing in ၀င်လိုက်ပါ။ အောက်ဆုံးနားလေးက find my mobile ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီး start tracking ဆိုတဲ့ခလုပ်လေးကိုနှိပ်ပြီးရှာနိုင်သလို findmymobile.samsung.com သို့သွားပြီးလည်း တိုက်၇ိုက်ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မိမိက အကောင့်ဝင်ပြီးရှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ Phone က GPS ကို auto ဖွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တော့ S4 နဲ့ S3 မှာစမ်းထားတာပါ အဆင်ပြေလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ။ အခြားသော model တွေမှာလည်းစမ်းသပ်လို့ အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။
Android နည်းလမ်းများ Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
Samsung Device ကို Remote controls လေး on ပြီး အင်...
MTK Phone Root ( New Version)
ကွန်ပျူတာက မသိတဲ့ဖိုင်တစ်မျိုးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပြီ...
Barcamp Pyay 2013
Beginner's Guide to Networking ကွန်ပျူတာမှ ကွန်ယက်...
Network အသုံးပြုနည်းလက်စွဲ (အောင်လင်း)
Xtreme Wheels Pro v1.5 APK (APK+Data) (ဆိုင်ကယ်စတန...
TeamViewer 8.0.18930 Enterprise + Portable
Team Viewer အသုံးပြုနည်း (မြန်မာလို)
HTC ONE X ကို Root လုပ်ကြမယ်
FLash Songs ကို Mp4(or)Phone(or) ခွေသို့ပြောင်းနည...
မြန်မာ unicode အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်
Internet Download Manager 6.16 Build 1 Final ( Pat...
IObit Driver Booster 1.0
SpeedView Pro 3.1.2 apk
The Android Myanmar's By Bo Sunny Lwin (မြန်မာလို)...
Samsung Galaxy S4 မှာ ပါဝင်တဲ့ SHealth app လေးပါ
Latest Flash Player for Android Phones (lasted Ver...
Install Latest Google Apps (GApps) on Other Androi...
Samsung Galaxy S4 Original Wallpapers and Ringtone...
Facebook 3.3 update version ( For Android )
ကွန်ပျူတာမှာ Zawgyi One နဲ့ရေးတဲ့ မြန်မာစာလေးတွေ အ...
Samsung Galaxy S2 Plus GT-I9105P root လုပ်မယ်
Canon iP 3680 resetter
Soft-bricked ဖြစ်နေတဲ့ Samsung Galaxy S4 GT-I9500,...
Root မလုပ်ပဲ Galaxy S4 ရဲ့ TouchWiz Speed ကို တင်ြ...
Skype 6.5.73.158 Final / 6.5.0.158 Business Editio...
Mozilla Firefox, Google Chrome မှ BookMarks များ B...
Facebook အကောင့်အသစ်ဖွင့်ရင် lock မကျအောင်ဖွင့်မယ်...
Sony Xperia Z 4.1.2 ကို လွယ်လွယ် Root မယ်
Canon iP 1200 မှ 2200 Resetter နှင့် ဆေးဘူးဆေးနည်း...
(သီချင်းလက်ကွက်ကို ပြပေးမယ့်) Songsterr v1.39.4 AP...
WinRAR 5.00 Beta5(x86/x64)
WIFI ကိုသုံးပြီး WIFI အကြောင်းလေးသိစေဖို့
PC မှာ Android OS ကိုတင်သုံးကြမယ်
Kaspersky Tablet Security 10.5.45 Released
ဇောက်ထိုးဖြစ်နေတဲ့ ဗီဒီယိုတွေတည့်ဖို့အတွက် Video R...
Car Race by Fun Games v1.0 APK (ကားပြိုင်ဂိမ်း)
USB ကနေ အလွယ်တကူ Windows တင်မယ်
အကောင်းဆုံး အင်္ဂလိပ်စကားပြော (ဦးသိန်းလွင် B.A)
Norton 360 2013 20.3.1.22 Final + Trial Reset
Xilisoft HD Video Converter 7.7.2 ( 29.5.2013)
Java Runtime Environment 8.0 (x86/x64)
Angry Chicken: Christmas! v1.1.18 APK
NetCafe 5.5 r836